'संविधान कार्यान्वयन गर्न महिलाले पनि क्षमता बढाउनु पर्छ' : कानूनमन्त्री तुम्बाहाङ्फे (अन्तर्वार्ता) | Kendrabindu Nepal Online News
‘संविधान कार्यान्वयन गर्न महिलाले पनि क्षमता बढाउनु पर्छ’ : कानूनमन्त्री तुम्बाहाङ्फे (अन्तर्वार्ता)
१ आश्विन २०७७, बिहीबार १५:३८
नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट बनेको नेपालको संविधान यही असोज ३ गते चार वर्ष पूरा गरी पाँचौँ वर्षमा यही असोज ३ गते प्रवेश गर्दैछ । संविधान दिवसका अवसरमा नेपालको संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग गरिएकाे कुराकानी :
संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरु बनिसकेका छन् । संविधानअनुकूलका कानूनहरु सङ्घमा १५८ निर्माण भएका छन् । प्रदेश नं १ मा २६ वटा र चार स्थानीय तहमा चारचार कानून, प्रदेश नं २ मा २१ वटा र स्थानीय तहमा दुई कानून, वाग्मती प्रदेशमा २४ वटा र १३ स्थानीय तहमा १३ कानून, गण्डकी प्रदेशमा २७ र १८ स्थानीय तहमा १८ वटा कानून, प्रदेश नं ५ मा ३१ र दुई स्थानीय तहमा सात वटा कानून, कर्णाली प्रदेशमा २१ र १९ वटा स्थानीय तहमा १९ कानून तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ वटा र ८८ स्थानीय तहमा १०३२ कानून बनेका छन् । संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने कानूनहरु बनिसकेका छन् । मौलिक हकका कानूनमा खाद्य सम्प्रभुता र आवास हकको नियमावली बन्ने क्रममा छ । कोरोना भाइरसको जोखिमका कारणले यो थोरै ढिलाइ भएको छ । बाँकी सम्पूर्ण मौलिक हकका कानून र नियमावली बनेर लागू भइसकेको अवस्था छ । संविधानअनुसार तीन तहको सरकारले काम गरिरहेको अवस्था छ ।
तीनै तहका सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध छ । कहीँकतै समस्या छैन । मैले पनि प्रदेशले सङ्घले अधिकार कटौती गर्यो भनेको सुनेको छु । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । त्यही अनुसार काम गर्ने हो । तीनै तहको सरकारको सम्बन्ध कानूनमा तोकिए बमोजिम नै छ । मुलुक सङ्घीयतामा पहिलो पटक प्रवेश गरेको हो । त्यसका लागि अध्ययन र कानून बनाउने प्रक्रियामा केही समय लाग्न सक्छ । यही केही समय लाग्दाखेरि तीन तहका सरकारको अन्तर्सम्बन्ध कमजोर भयो । एक अर्काको अधिकार कटौती भएको भन्ने होइन । संविधान अनुरुप सङ्घको कानून बनाएर प्रदेशलाई मस्यौदा पठाई त्यहीअनुरुप प्रदेश कानून बनाउने काम गरिएको छ । सङ्घले गर्ने समन्वयकारी भूमिका पूरा गर्दै आएको छ ।
संविधान संशोधन भन्ने सामान्य कुरा होइन । राजनीतिक रुपले छलफल र बहस चलाउनुपर्छ । अनि मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । महिला, आदिवासी वा दलित भएको हिसाबले हेर्दा पनि सबैले पाउने अधिकार संविधानमा छ । लिङ्ग, जातीय वा भाषिक कुनै पनि हिसाबले विभेद गरेको छैन । मलाई अधिकार कम छ भन्ने लागेको छैन । पहिलाको संविधान जस्तो यो संविधान होइन । पहिलाको संविधानमा महिलालाई मताधिकार समेत थिएन । अहिले त्यस्तो अवस्था होइन । महिला, जनजाति, दलित, मधेशी सबैको अधिकारको व्यवस्था संविधानमा छ तर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने जरुरी छ । यसैलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सके हुन्छ । त्यसका लागि महिलाले पनि आफ्नो क्षमता बढाउन जरुरी छ ।
संविधानले राज्यका प्रत्येक निकाय तथा राजनीतिक दलमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषदमा जम्मा तीन महिला (१२ प्रतिशत) छन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा महिला नै छैनन् । प्रदेश प्रमुखमा एक मात्र महिला हुनुहुन्छ । हाल दुई जना महिला मात्र राजदूत भएको अवस्था छ । मुलुकमा महिलाको जनसङ्ख्या ५१ प्रतिशत रहेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशतको माग पूरा नपाएको अवस्था छ । बरु ५१ प्रतिशतको कुरा उठाए ३३ प्रतिशत सुनिश्चित होला कि ? बलियो पुरुषसँग कमजोर महिला उम्मेदवार उठाउने चलन छ । महिलामहिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा महिला सहभागिता बढ्ने थियो कि ?
अन्तर्वार्ता, कानूनमन्त्री तुम्बाहाङ्फे
Prev५० प्रतिशत यात्रु राखेर उडान गर्न दिने सरकारको निर्णय अव्यवहारिक–एओएएन
‘अमेरिकामा अक्टोबरदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप बाँड्न सकिन्छ’ : ट्रम्पNext
अन्तर्वार्ता : ‘राष्ट्रियतालाई सुदृढीकरण गर्ने हिसाबले आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न पहलकदमी गर्नु पर्छ’ : सभामुख सापकोटा
शासकले जनताको ध्यान मोड्न सीमा विवाद सृजना गरेको डा. भट्टराईको आरोप अन्तर्वार्ता